21 Qalab Naqshad Shabakad bilaash ah laga bilaabo Xagaaga 2020 | BehMaster
Bogga ugu weyn/web Design/21 Qalab Naqshadeynta Webka Bilaashka ah laga bilaabo Xagaaga 2020
Kheyraadka bilaashka ah ee ka imanaya bulshada nashqadeynta ayaa ku dari kara qiimaha goobta ecommerce. Halkan waxaa ku yaal liistada qalabka cusub ee webka iyo astaamaha naqshadeynta laga bilaabo xagaaga 2020. Waxaa jira barnaamijyo naqshadeeye iyo soo-saare, koodh koodh, qalab midab leh, noocyo, iyo waxyaabo kale oo badan Dhammaan qalabyadani waa bilaash, in kastoo qaarkoodna ay bixiyaan noocyo qaali ah.
Tifatiraha X waa goob abuurista websaydhka loogu talagalay naqshadeeyayaasha iyo hay'adaha. Dhis boggaga xogta ku keydsan iyo codsiyada websaydh ee adag. Abuur oo bilow mashaariic aan xadidnayn bilaash. Kordhi si aad ugu darto domain caadadiisu tahay, awood u siiso bixinta khadka tooska ah, iyo inbadan. Tifatiraha X waa qayb ka mid ah Wix.
isoflow waa aalad loogu talagalay abuurista jaantusyada isometric ee bandhigyada, dukumiintiyada, iyo sawirada. Si fudud u dhaqaaji astaan, iyo isku xirayaasha iyo sumadaha ayaa raaci doona.
Liin dhanaan waxay la mid tahay bilowgaaga horumareen, horumariye madax banaan. Raadi horumariye ama tignoolaji sare oo loogu talagalay mashruucaaga ama ganacsigaaga. Adeegso iswaafajinta la caawiyay ee dammaanadda beddelka halista lahayn. Wax lacag ah ha bixin marka laga reebo heerka saacadaha ee horumariyaha.
Waraaqaha Waraaqaha waa abka webka wada sheekaysiga tooska ah ee il furan oo ku qoran Elixir oo wata nooca la doortay ee App.papercups.io.
Tociinaad waa xirmo naqshadeynta isticmaale-dhexgalka ah ee Sawirka, Figma, iyo Adobe XD. Waxaa ka mid ah qaybaha u diyaarka ah in la isticmaalo, astaamaha, astaamaha, iyo qaababka si dhakhso leh loogu soo noqnoqdo.
Sifeeyaha NSFW waa kordhinta browserka si loo ogaado oo loo shaandheeyo sawirada aan-ammaan-lahayn ee shaqada
Foombutton waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku sameysato badhan fudud bartaada oo soo baxda foomka xiriirka. U habee ku dhowaad dhammaan qaybaha Formbutton, oo ay ku jiraan qoraalka, farta, astaamaha, midabada, soo gudbinta akhlaaqda, xogta, iyo qaladka wax ka qabashada.
Webdesign Qalabka, uruurinta agabyada iyo kheyraadka loogu talagalay naqshadeeyayaasha iyo codeeyeyaasha, waxaa ku jira qiyaastii 1,000 ilo oo ku jira 78 qaybood oo kala duwan.
toosan waa qalab maarayn iskaashi ah oo lagu hagaajinayo mashaariicda software, sprints, hawlaha, iyo dabagalka cayayaanka. Maamul horumarka kooxdaada, culayska shaqada, iyo xawaaraha.
Qoraalka Codka waa kordhin loogu talagalay Slack inay u dirto farriimo cod la raadsan karo oo ay ku jiraan qoraallo qoraal ah kanaalka Slack ama farriinta tooska ah.
FaafidaSimple wuxuu adeegsadaa xogta ku jirta xaashiyaha Google si loo abuuro degello casri ah oo leh astaamo la beddeli karo. Adeegso Xaashida Google si aad u maamusho alaabadaada, qiimahaaga, iyo amarradaada. Ku hel sifooyinka sida shaandhaynta, raadinta, kala-soocidda, ururinta macdanta `` lead '' ee foomamka ah, ku habboonaynta mashiinka wax lagu raadiyo, iyo inbadan.
Aasaaska aasaasiga ah waa ururinta taxaddar u ah astaamaha aasaasiga ah, la-beddeli karo ee loogu talagalay naqshadeynta alaabta iyo horumarinta. Basicons waa la cusbooneysiiyaa oo la sifeeyaa toddobaadle.
Qalabka Rasaas wuxuu abuuraa jees jees qalab oo ay ku jiraan sawirro shaashadda ah. Xulo kala-qeybaha qalabka kala duwan ama dooro barxad bulsheed. Habee midabka asalka shiraaca. Kadib soo dejiso jeesjeeska la abuuray sida sawir sare oo PNG ah.
Qalabka Hubinta Marti qaadka waxay kuu ogolaaneysaa inaad aqoonsato martigaliyaha websaydh kasta. Gali URL ama magaca domain, oo ku hel natiijooyinka martigeliyaha, magaca, cinwaanka IP, goobta xogta xarunta, iyo faahfaahinta xiriirka.
Wajiyo Bilaash ah waa xog ururin kooban oo noocyo bilaash ah. Ku darso qaababka: sans, serif, cursive, slab, monospace, iyo bandhigay. Goobtu waxay ka timid Simon Foster, hogaamiyaha dhijitaalka ah ee Hamilton-Brown, oo ah hay'ad naqshadeynaysa.
Wajiyo Bilaash ah
Aafada, iskudhaf ah “dufan” iyo “hannaan,” waa font madadaalo iyo midab midab leh oo loo dhisay bandhig.
Sk Finer waa qaab ballaadhan, xagal monospace ah - oo u eg naqshad 60s.
S s waa xaraf gacmeed xarago leh oo xarago leh si fariin loogu gudbiyo qaab soo jiidasho leh.
Socis dhawaqa waa xarfo gacmeed caato ah oo casri ah oo loogu talagalay sumadeynta, madaxyada, iyo xigashooyinka.
Gacanta sudhan waa far qaro weyn, gacmeed gacmeed lagu qoray oo leh astaamo u muuqda kuwo firfircoon.
Puulchellla waa xarrago, ubax sans serif font for logos and branding.
[Giveaway] Ku guulaysta 1 ka mid ah 5 WooBuilder waxay xannibaysaa shatiga nolosha
Iibka Maalinta Shaqaalaha ee WordPress, Kuubannada & Heshiisyada 2020